Vodafone kwadoro nkwado 5G na Europe n'oge okpomọkụ a | Gam akporosis
Fọdụ mba Ha na netwọk 5G na-arụ ọrụ nke ọma ihe karịrị otu ọnwa. South Korea bụ nke mbụ, ebe enwere otutu mmadu puku mmadu ji ya. N'ihi mwepụta nke Galaxy S10 na mbipute ya na 5G. Ekwentị ndị a amalitela ịbịaru Europe, mana n'oge ahụ netwọk 5G adịghị njikere. Ọ bụ ezie na Vodafone ga-eweta mgbanwe n'akụkụ a n'oge na-adịghị anya.
Onye ọrụ ahụ kwadoro nke ahụ amalite n'oge ọkọchị a na ntinye nke 5G na Europe. United Kingdom bụ obodo izizi Vodafone ga-etinye netwọkụ a. Citiesfọdụ obodo na mba ahụ ga-enweta ya. Na mgbakwunye, enwerekwa mgbanwe na ịgagharị maka ndị ọrụ ndị ọzọ.
Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool na London bụ obodo ndị Vodafone họpụtara maka itinye 5G na United Kingdom. Companylọ ọrụ ahụ ahọrọ ụfọdụ obodo kachasị na mba ahụ maka usoro nke mbụ a. A na-atụ anya ka ọ bụrụ July 3 mgbe ọ banyere mba ahụ, dị ka onye ọrụ ahụ kwuru.
Na mgbakwunye, ekwenyela na maka ụbọchị ndị a ha ga-enwe ndekọ nke ekwentị na 5G dị. Ekwentị izizi izizi bụ Galaxy S10 5G, nke Xiaomi Mi MIX 3 5G na Huawei Nwunye 20X 5G. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ga-enwe ike ịzụta ụdị ndị a na United Kingdom na eze.
Vodafone gosikwara na ntinye nke 5G bụ ihe ga-enwe nsonazụ na mba ndị ọzọ. Na nke a ọ ga-emetụta njegharị, n'ụzọ dị mma. Ebe ọ bụ na Germany, Italy na Spain ga-enwe ohere iji njem na njikọ ọhụrụ a, nke kwesiri ikwe nkwa nyocha ngwa ngwa.
A na-atụ anya ya maka oge ọkọchị, agbanyeghị Vodafone akwadoghị ụbọchị na nke a n'oge a. Mana ọ dị ka ọnwa ole na ole, ọ kwesịrị ịbụ nke gọọmentị. Ya mere enwere izu ole na ole n'ihu na ọtụtụ ọrụ maka onye ọrụ ahụ, na ntinye 5G na Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vodafone ga-eweta 5G na Europe n'oge okpomọkụ a
Sọpụrụ na-akwado modul igwefoto azụ elele nke Honor 20 flagship